Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 53
Inona no fifandraisana misy eo amin'ny magnetism sy ny gravité, ary inona no tsy mampiavaka azy, raha tsy izany? Ary inona ny fifandraisana misy eo amin'ny magnetism sy ny magnetism biby, ary ahoana ny fahasamihafan'izy ireo, raha tsy izany?
Ny siansa mahasoa dia tsy manondro hoe inona ny herisetra, ary miaiky fa tsy mahafantatra izany. Ny zava-misy, izay heverin'ny mpahay siansa, ary antsoina hoe gravitation, dia lazaina fohifohy, fa misy ny tifitra izay ny vatana tsirairay dia manana vatana hafa mifanaraka amin'ny volany, ary mihena ny tanjaky ny tifitra ny fitomboan'ny elanelana misy eo amin'ny vatany ary mitombo amin'ny fahantrana azy ireo. Ny fizotry ny zava-misy, izay antsoina hoe gravitation, dia tsy misy fanajana ny fandaminana ny singa ao amin'ny vatana. Noho izany, ny vahoaka ara-batana rehetra, araka izany, dia lazaina fa hifanandrify.
Ny herin'ny maizimaizina dia hery mifono mistery momba ny natiora izay nomen'ny siansa hatreto dia tsy misy fanazavana kely, na dia fantatry ny mpahay siansa aza ny zava-misy sasany avy amin'ny hery magnetic. Ny magnetism no hery maneho azy amin'ny alalan'ny magnets. Ny môtô iray dia vatana iray izay toy ny polaritary ny rehetra na ny sasany ary ny toerana misy ny famaky eo anelanelan'ireo bao eo amin'ny boribory. Ny boribory tsara amin'ny ampahany kely misy famaky mifanitsy aminy dia manondro lalana iray, ny tendron-tsinontsin 'ireo antotan-javatra ireo dia manondro ny mifanohitra amin'izany. Ny vatana dia môtô iray, arakaraka ny fiheverana ireo singa izay misy paradisa miara-dalana na manakaiky ny parallèle. Ny maotera dia manatona ny fahalavorariana ho toy ny magnets, mifanaraka amin'ny isa misy azy, toy ny polaratarina sy ny famaky mifanitsy aminy, raha ampitahaina amin'ny isa misy ny ampahany tsy misy famaky mifanohitra ary tsy toy ny polarida. Ny maotera dia miseho amin'ny vatana araka ny ohatran'ny singa ao amin'ny volon'ny vatana izay maozika, izany hoe toy ny polaratarina sy famaky mifanitsy. Ny herin'ny maizimaizina dia hery maneran-tany manerana an'izao tontolo izao, saingy maneho amin'ny alalan'ny vatana izay misy rafitra kely misy azy. Izany dia mihatra amin'ireo zavatra tsy mananaina.
Io hery io ihany dia atsangana ho amin'ny fahefana ambony kokoa amin'ny vatana biby. Ny endri-tsoratry ny biby dia ny fihazonana hery amin'ny alàlan'ny vatana, raha toa ny vatan'ny olona dia manana endrika ara-drafitra. Ny rafitra ho magnetic dia tokony ho toy izany fa ny singa ao amin'ny sela sy ny sela ao amin'ny vatana dia rafitra iray ka ny herin'ny hery manerana izao tontolo izao dia hamakivaky azy ireo. Amin'izany, ny rafitra dia tokony hitovitovy amin'ny mafana tsy manan'aina. Ny atin'ny vatan'ny biby dia ny hazondamosina, ary ny vatam-biby dia manjelanjelatra rehefa ampifanarahana ny ampahany ao amin'ny sela eo amin'ny tapany mifandraika amin'ny hazondamosina sy ny tsoka ao amin'ny taolana. Ny fihetsika avy amin'ny bala amin'ny vatana dia amin'ny alalan'ny voaly. Ny fandroana na ny saha maitso dia ny rivotra manodidina ny vatana. Ny biby rehetra ao anatin'io sehatra io dia mahatsapa ny fiantraikan'ny hery manana hery manerana izao tontolo izao izay mamakivaky ny vatan'ny biby ary nantsoina hoe magnetism biby.
Ny masom-biby dia tsy singa manokana, na dia manana anjara amin'ny famokarana izay antsoina hoe magnetism manokana aza. Ny fitiavan-tanam-biby dia tsy hipnotisma, na dia mety hampiasa azy io aza ny olona manana magy avy amin'ny biby mba hamoahana ny vokatra ipnotisma.
Ny sharira linga, na endrika tsy hita maso ao amin'ny vatana, dia batterie ho an'ny fiainana. Ny iray amin'ireo fombafomba atao amin'ny fiainana dia ny magnetism. Raha toa ny linga sharira amin'ny vatan'olombelona dia manana endrika ara-batana araka ny filazàna, izany hoe, ny ampahany amin'ny alim-pandaminana, dia afaka mihazona sy mitahiry ny fiainana ary afaka mampita ny fiainana eo ambanin'ny lafiny ny antsoina hoe magnetism biby.
Ny valin'ny fanontaniana dia hoe tsy misy fifandraisana mivantana eo amin'ny asan'ny maizina sy ny biby araka izay voafaritra. Tsy mitovy amin'izany izy ireo, manoloana ny herimpo, ny volombava rehetra dia manintona ny andaniny rehetra, ary ny hery antsoina hoe gravitation dia mavitrika amin'ny fotoana rehetra; Nefa ny hery antsoina hoe magnetism biby dia tsy mihetsika amin'ny fotoana rehetra, fa mazoto miasa ao anatin'ireny fotoana ireny raha tsy misy ny rafitra biby, ny endri-javatra toy izany dia toy ny polarization ny ampahany ary ny paralisalisage marina na mifanohitra ny famaky.
Ahoana ny fanasitranana ataon'izy ireo amin'ny fanetsiketsehana biby?
Ny herin'ny viriosy dia hery manerantany miasa amin'ny alalan'ny vatan'olombelona, ​​izay mahatonga ny sela hifarimbona sy mandamina amin'ny fomba iray, ny polarization sy ny fandaminana dia mitarika ny fiainana manerantany ao amin'ny vatana ary mamela ny fifindran'ny fiainana mivantana any amin'ny vatana hafa.
Ny vatana ara-batana malemy dia iray izay tsy misy ny fandaminana araka ny tokony ho izy ireo singa ao aminy, na ny iray izay misy fanakatsakana ny fiainan'ny orana, na ny fanovana natao noho ny tsy fisian'ny fofona mahazatra sy ny fivoaran'ny fiainana. Ny iray izay manana magnetism maro, ary ny iray izay ahafahan'ny magnetism biby manalefaka, dia mety hanasitrana aretina amin'ny hafa. Afaka manasitrana amin'ny fanatrehany irery izy raha tsy misy ifandraisany amin'ny vatany, na afaka manasitrana amin'ny fifandraisany amin'ny olona iray ho sitrana izy. Rehefa manasitrana amin'ny fanatrehana ny fanasitranana ny fanasitranana, dia atao amin'ny fametrahana ny marary ao anatin'ny tontolo manodidina ny fanasitranana. Ny atmosfera dia fandroana maizimaizina, voampanga amin'ny fiainana manerantany miasa tahaka ny fanetsiketsika biby. Ny angomanga biby dia anarana mahantra ho an'ny hery lehibe eo amin'ny fiainana manerantany, saingy ampiasaintsika eto izany mba hitoetra ao anatin'ny fampiasana ny fotoana. Ny fandroana dia miasa amin'ny rivotra iainan'ny olona marary ary mitarika azy hamerina amin'ny laoniny ny herin'ny fiainana manerantany, amin'ny alàlan'ny fanesorana ny fikorontanana, ny famerenana ny fivoahana ary ny fanavaozana ny molekiola ao anaty sela, mba hahafahan'ny hery mamelona mikoriana tsy mitsahatra ary ny taova ao amin'ny vatana dia avela hanatanteraka ny asany voajanahary.
Ny fanasitranana amin'ny alalan'ny magnetism an'ny biby, rehefa vita amin'ny fifandraisana mivantana amin'ny vatana amin'ny fanasitranana, dia tsara atao rehefa atambatra ny tanan'ny fanasitranana, izay manao ny tsara sy ny banga, eo amin'ny vatana na ny ampahany voakasika. Ny maotera dia mety hampiakatra avy amin'ny faritra rehetra amin'ny vatana, toy ny maso sy ny nono, fa ny fomba voajanahary indrindra amin'ny fampiharana azy dia amin'ny alalan'ny tanana. Ny singa manan-danja amin'ny fanasitranana ny fanasitranana dia ny hoe ny sain'ny mpitsabo dia tsy tokony hanelingelina ny fampitaovana ny magnetism. Matetika ny saina dia misy fiantraikany eo amin'ny fanasitranana ny fanasitranana, satria matetika ny mpitsabo no manindry fa tsy maintsy mitarika ny fametahana ny magnetism amin'ny sainy izy. Amin'ny toe-javatra rehetra iheverana ny mpitsabo amin'ny sainy amin'ny fifandraisany amin'ny maizina, raha toa ka manandrana manasitrana izy, dia hanao ratsy izy satria ny saina dia tsy manasitrana ny fanasitranana, na dia mety hitarika sy hamolavola ny maizina aza izany. Ny saina dia manelingelina sy manakana ny fihetsika voajanahan'ilay maizina. Ny maotisy dia hanao zavatra raha tsy manelingelina ny saina. Ny natiora, fa tsy ny saina, dia miteraka ny fanasitranana. Ny sainan'ny olona dia tsy mahafantatra ny natiora, ary tsy mahafantatra ny tenany rehefa ao amin'ny vatana. Raha nahalala ny tenany tao amin'ny vatana izy dia tsy hanelingelina ny saina ny saina.